Toyota Wish 2003 (#676057) ကို Zay Yar Thi Ri မြို့နယ်တွင... | CarsDB
Lot Number: #676057
Zay Yar Thi Ri, Nay Pyi Taw
လိုင်စင် -5J/**** YGN (ရန်ကုန်လိုင်စင်)
Colour. Black (အနက်ရောင်)
Model 2003 late (2004) xs အမှန်ပါ။
ဘက်မှန်မီးချောက် & original alloy& ရှေ့ fog light မီး
ဒစ်ဘရိတ်ပတ်လည်။ရှေ့. Apole တိုင်ပါ။
All power window & Aircom အေးစိမ့်။
နောက်မီးအဖြူ။&ကားအောက်ပိုင်းအထူးကောင်းမွန်ပါသည်။ Good Condition,,***CarsDB တွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါသည်***
CarsDB တွင် ( ဦး/ဒေါ် ) Arkar Min မှ ကြော်ငြာတင်ထားသော Toyota Wish 2003 နှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းလိုသည်ဟု ပြောပါရန်။